Posts 644	Thanks 198
Rep Power9Corrosion and it's controls
Corrosion ဟာ ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ အလွန်အရေးပါလာနေပါတယ်။ Oil &amp; Gas လောကမှာ၊ Aircraft နယ်ပယ်မှာ၊ Marine Engineering မှာ အထူးအရေးပါတဲ့ ပညာရပ်တခုပါ။ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေအနေနဲ့ ဒီအပိုင်းမှာ အတော်လေး အားနည်းနေကြသေးတာကို ၀မ်းနည်းဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာလည်း Corrosion နယ်ပယ်ရဲ့ အရေးပါမှုတွေကို သိပ်မသိကြသေးသလို အသုံးချပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မှာလည်း အလွန် အားနည်း နေသေးတာဝမ်းနည်းစရာပါပဲ။ တကယ်တော့ Corrosion ဆိုတာ သံချေးတက်ခြင်းတခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ အများကြီးပါ။ အဲဒီတော့ Corrosion နဲ့ စတင် မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ Corrosion
Dealloying Stress Corrosion Cracking (Environmental Cracking)
အစရှိတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အဖြစ်များတဲ့ Corrosion Type တွေကို ပြောပြတာပါ။ ကျန်တာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အချိန်ရရင် ရသလို ကြိုးစားပြီး ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။ သိချင်တာလေးတွေရှိရင်၊ ဆွေးနွေးချင်တာလေးတွေရှိရင်လည်း ရေးထားခဲ့ကြပါခင်ဗျား။ ကျနော် အချိန်သိပ်မရလို့ အများကြီးမရေးနိုင်တာရယ်၊ ခဏခဏမရေးနိုင်တာရယ်တော့ ခွင့်လွှတ်ကြစေလိုပါတယ်ခင်ဗျား ...
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to HarryLwin For This Useful Post:
iPod, Zarni234 01-03-2009 09:42 AM
Rep Power0ပြန်စာ -> Corrosion and it's controls
Reply With Quote 01-05-2009 09:04 PM
Rep Power9ပြန်စာ -> Corrosion and it's controls
Reply With Quote 07-07-2013 12:33 PM
Rep Power0အစ်ကို ကျွန်တော်က corrosion နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုမှ studyလုပ်နေတာပါ။ ဒီထက်ပိုပြီး corrosion နဲ့ပတ်သတ်ပြီး သိထားသမျှလေးတွေရှယ်ပါဦးဗျာ။ စာအုပ်တွေရှိရင်လည်း ပေးပါဦးလို့.....
Reply With Quote 07-07-2013 02:05 PM
Rep Power0Reinforced concrete structure အများစုဟာ သူတို့ရဲ့ service life အတွင်းမှာ သက်ရောက်ခံရတဲ့ အခြေအနေတွေက မတူညီကြပါဘူး။ မတူညီတဲ့အခြေအနေအောက်မှာ ပဲ structures တွေမှာ အမျိုးမျိုးသော degradation mechanisms တွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ degradation mechanisms တွေက condition of sturcture နဲ့ remaining service life ပေါ်မှာ လွှမ်းမိုးမူတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ civil field နဲ့ပြောရင် Corrosion of steel in reinforced concrete structure ဟာဆိုရင် အဖြစ်များ တဲ့ problemဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Offshore sturcutres,caostal sturctures တို့မှာအဖြစ်များပါတယ်။ ပင်လယ်နဲ့ နီးတဲ့ဒေသတွေမှာလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ်။ Reinforced concrete structure မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကတော့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ Carbonation of concrete and Chloride-induced corrosion ကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ်။ ဥပမာ သုံးတဲ့aggregate မှာ salt ပါတာမျိုး နောက်တစ်ခုက mixing waterမှာ salt ပါသွားတာမျိုး ပေါ့။ အသုံးပြုမယ့်materialsတွေကိုသေချာ testလုပ်သင့်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက concrete cover လုံလောက်အောင် မထားခဲ့တာကြောင့် ဖြစ်တာများပါတယ်။ cover က မလုံလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြင်ပကလာတဲ့ stressတွေကြောင့် crack တွေပေါ်မယ် အဲဒီကတစ်ဆင့် ပြင်ပက chlorieတို့ oxygenတို့စတာတွေ ၀င်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်ကတော့ embeded rebar တွေမှာ oxidation ဖြစ်တာပါပဲ။ oxidation မဖြစ်ခင် rebar ပေါ်က passive layer ကိုအရင်ဆုံး ဖြတ်စီးပစ်ပါတယ်။ passive layer ဆိုတာက embeded rebar တွေအတွက်corrosion မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတဲ့ protectcion layer တစ်ခုပါ။ Corncrete pore water ရဲ့ PH value က over 12.5 ကျာ်ရင် alkalinity concentration များပြီး rebar တွေမှာ passive lyaer froming တွေဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ passive layer က ဖြတ်စီးခံလိုက်ရရင်တော့ corrosion စဖြစ်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက Corrosion နဲ့ Rust က မတူပါဘူး။ Corrosion results in the formation of rust which has non of its good mechanical properties. ASTM သတ်မှတ်ထားတဲ့ corrosion က " ASTM terminology ( G15 ) defines corrosion as “ the chemical or electrochemical reaction betweenamaterial, usuallyametal, and it envir- onments. It can causeadeterioration of the material and its properties."
Reply With Quote The Following2Users Say Thank You to Zarni234 For This Useful Post:
Dom, iPod 07-12-2013 05:16 PM
Location Rangoon, Yangon, Burma, Myanmar
Posts 34	Thanks 676
Rep Power0Hi, All!
I'm here to share some of my collections about Corrosion and it's Controls. Actually I'm not from this filed. I'm from electrical field but I have to study CP system because of my work. And also I'm waiting for all of yours discussion upon this article. Cheers!
Reply With Quote The Following User Says Thank You to iPod For This Useful Post:
Dom + Reply to Thread